Insiza ye-Epic Games 'Easy Anti-Cheat manje isiyasebenza neLinux neMac | Kusuka kuLinux
Okuhle | 23/09/2021 10:28 | Imidlalo, Izaziso
Ekuqaleni konyaka, I-Easy Anti-Cheat ye-Windows yenziwe yatholakala kubo bonke abathuthukisi mahhala futhi kusukela ngoSepthemba 23, Izinsizakalo ze-Epic Online inwebise ukusekelwa kweLinux neMac konjiniyela abagcina izinhlobo ezigcwele zemidlalo yabo yalezi zingxenyekazi.
Futhi kungukuthi ngoJuni, i-Epic Games yethule izingxoxo zezwi zamahhala nezinsizakalo zokulwa nokukopela abathuthukisi abangayisebenzisa emidlalweni yabo. Lezi zinsizakalo zinikezwa njengengxenye yesitudiyo i-Epic Online Services suite, engasetshenziswa nganoma iyiphi injini yemidlalo futhi iyahambisana neWindows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Nintendo switchch, iOS, ne-Android.
Njengezinye izinsizakalo ezifakiwe ku-EOS SDK, isici sokuxhumana ngezwi sasetshenziswa futhi ekuqaleni kumdlalo odumile we-Epic weBat Royale. Isevisi yokuxoxa ngezwi iyi-cross-platform futhi isekela ingxoxo yomuntu ngamunye neyeqembu kumagumbi okuxoxa nangesikhathi semidlalo yomdlalo.
Uma usebenzisa le nsizakalo, idatha yezwi idluliselwa ngamaseva aphambili e-Epic kanti ubuchwepheshe busingatha konke ukukala kanye neQoS. I-Epic ithi ubuchwepheshe buvele "buhlanganisiwe futhi buhlolwe ukulwa eFortnite," okuqinisekisa ukuthi ingaphatha izigidi zabadlali ngasikhathi sinye.
Ngaphezu kwengxoxo yezwi, Izinsizakalo ze-Epic Online nazo zengeza ukusekelwa kwe-Easy Anti-Cheat, insiza eyenzelwe ukukhipha ukopela futhi uyiqale kumidlalo eku-inthanethi. I-Easy Anti-Cheat phambilini ibitholakalela onjiniyela abavela eceleni ukuthi banikeze ilayisense imidlalo yabo, kepha manje sebekhululekile njengengxenye yezinsizakalo ze-Epic Online futhi kufanele bavumele onjiniyela abaningi ukuthi bayisebenzise.
U-Epic uphikisana nokuthi isoftware elwa nokukopela enjengale iya ngokuya ibaluleka kakhulu Njengoba imidlalo eminingi inikeza ukunqamula phakathi kwe-PC namanye amapulatifomu, njengoba ukukopela kutholakala kakhulu ku-PC.
Njengenye isoftware elwa nokukopela, I-Easy Anti-Cheat kwesinye isikhathi ingadala izinkinga kubantu abangakopeli bese ilebula isoftware engenacala njenge-malware. Ngakho-ke, kukude nokuba yisixazululo esifanelekile. Kepha ngokukhohlisa okuhlasela imidlalo eminingi emikhulu emhlabeni, kunzima ukuphikisana nabathuthukisi abanelinye ithuluzi ku-arsenal yabo.
I-Epic ifaka zombili izinsizakalo njengengxenye ye-Epic suite yayo yezinsizakalo eziku-inthanethi, azihlanganiswa nenjini yabo yemidlalo noma isitolo. Emibuzweni evame ukubuzwa yesayithi lakho; inkampani ithe ihlinzeka ngezinsizakalo mahhala "ngomzamo wokukhuthaza ukwamukelwa okubanzi kwayo yonke iminikelo ye-Epic" kanye nokwakha isisekelo esikhulu sama-akhawunti kuyo yonke inkampani nezindawo ezisebenzisana nayo.
Lokhu kuqaliswa kunezela i-Easy Anti-Cheat ohlwini lwamathuluzi abathuthukisi abazokwazi ukufinyelela kuwo. njengengxenye ye-Epic Online Services SDK. U-Epic uthenge inkampani ese-Helsinki esungule isoftware ngo-2018 futhi isebenzisa isixazululo sokulwa nokukopela e-Fortnite. Kunamakhulu eminye imidlalo futhi esebenzisa isoftware ukugcina ukukhwabanisa, kufaka phakathi i-Mediatonic's Fall Guys, ebinenkinga enkulu yokukopela.
Abathuthukisi bazokwazi ukuqapha futhi basebenzise izindlela zokulwa nokukopela ngomdlalo wakho ngosizo lwesoftware. Futhi njengoba i-Epic ihlela ukunikeza i-Easy Anti-Cheat ngezibuyekezo eziqhubekayo, abadali bemidlalo bazoba namandla okuvimba abadlali abanobuhlakani ukuthi bangabambi iqhaza njengoba nabakhohlisi beguquka ukuze babalekele ukutholwa.
Uma kushiwo lokho, isoftware ayiphelele futhi nemidlalo ehlukahlukene eku-inthanethi eyisebenzisayo isabhekene nabakhohlisi. Ngokuya ngemininingwane eqoqwe yiSurfshark VPN ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ngokwesibonelo, abakwaFortnite babenokubukwa okuphindwe kathathu okuhlobene nokukhohlisa kwe-YouTube (ukubukwa okungu-26,822,000 ukuthi kube ngqo) kune-Overwatch, endaweni yesibili. Yize kungebona bonke ababuke la mavidiyo e-YouTube abakhohlisile,
“I-Epic Online Services ikhona ukuxhuma abathuthukisi nabadlali bamageyimu kuwo wonke amapulatifomu, kufaka phakathi iSteam Deck ezayo, futhi kuyasijabulisa ukwenza njalo. Isinyathelo esisodwa kulokhu. «
Ngasekuqaleni konyaka, imidlalo ye-Easy Anti-Cheat ye-Windows yenziwe yatholakala kubo bonke abathuthukisi mahhala. Namuhla sandisa ukusekelwa kweLinux neMac konjiniyela abagcina izinhlobo ezigcwele zemidlalo yabo yalezi zingxenyekazi. «
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » Insiza ye-Epic Games 'Easy Anti-Cheat manje isiyasebenza neLinux neMac